Usetyenziso lweKharityhulam ye-Android
I-donepezil hydrochloride 5 mg
I-Calculator yeyona indala kuzo zonke ii -apps zemveli zeselfowuni. Mhlawumbi ikwayinto encinci edidayo nephazamisayo usetyenziso lwe-Android onokuyisebenzisa.
Inkqubo yesixhobo sokubala se-Android ivela kweli nani lilandelayo. Inguqulelo oyibonayo kwifowuni yakho inokubonakala yahlukile, nangona umsebenzi osisiseko uhlala unjalo. Kwakhona, cinga ngokutshintsha ukwenziwa kwefowuni ukuze ubone amaqhosha amaninzi okanye ambalwa; umfanekiso usebenzisa uqhelaniso oluthe tyaba, olubonisa amaqhosha ekhaltyhuleyitha ngakumbi.
Cinezela amaqhosha awahlukeneyo kwiscreen Calculator app ukufaka igalelo lakho. Amanye amaqhosha, anje ngengcambu yesikwere kufuneka eze ngaphambi kokuba uchwetheze ixabiso, njengoko kubonisiwe kulo mzobo.
Sebenzisa i-parentheses ukumisela ukuba leliphi icandelo le-equation ende ebalwa kuqala.
Cofa ixesha elide isicatshulwa sokubala (okanye iziphumo) ukusika okanye ukukopa iziphumo. Eli qhinga alinakusebenza kuyo yonke i-Calculator app.
Ukucoca isibonisi seapp Calculator, cofa ixesha elide kwi-DEL, CLR, okanye kwiqhosha C.
i-hist 4 10mg
Iziphumo ezingathandekiyo zeselexa kwabasetyhini
ngaphezulu kwekhawuntare yeyeza isifo seswekile
iziphumo ebezingalindelekanga zegabapentin
ungathatha i-2 flomax ngosuku